दिल्लीबाट एम्बुलेन्समा आएका थिए चितवनका सङ्क्रमित दम्पती – Dcnepal
Thu, 04 Jun, 2020 | २०७७ जेठ २२ गते
लकडाउनको मोडालिटीका विषयमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा
तातोपानीबाट उठ्यो एक अर्ब २७ करोड २६ लाख राजश्व
कोरोनाभाइरसबाट बचेर यौन सम्बन्ध कसरी राख्ने ? वैज्ञानिकले दिए यस्तो सल्लाह
कोरोनाभाइरसको पहिलेभन्दा संक्रामक स्ट्रेन भारतमा भेटियो !
कोरोनाको संक्रमणबाट विश्वमा ३ लाख ८८ हजार बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या ६५ लाख नाघ्यो
जोर्ज फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर बर्खास्त गरिएका प्रहरी अधिकारीमाथि नयाँ अभियोग
इण्डो प्यासिफिक सैनिक सम्मेलनमा नेपाली सेनाका रथीको सहभागिता
भारतमा एकैदिन साढे ९ हजार संक्रमित थपिए, १८ औँ नम्बरमा पाकिस्तान
दिल्लीबाट एम्बुलेन्समा आएका थिए चितवनका सङ्क्रमित दम्पती
प्रकाशित : २०७७ जेठ ९ गते १६:३३
भरतपुर । चितवनका दुई जना कोरोना सङ्क्रमित भारतको दिल्लीबाट एम्बुलेन्समा आएको खुलेको छ । दिल्लीस्थित राजीव गान्धी अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार गराएर उनिहरु यही जेठ ३ गते एम्बुलेन्स परिवर्तन गरी घर फर्किएका थिए । भरतपुर महानगरपालिका–६ केशरबाग निवासी ७४ वर्षीय पुरुष र ७३ वर्षीया महिलामा आज भरतपुर कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । उनिहरु दम्पती हुन् । उनिहरुसँगै दिल्ली गएका जेठो छोरामा भने सङ्क्रमण देखिएको छैन ।
उहाँहरु भारतबाट एम्बुलेन्समा कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकाबाट स्वदेश प्रवेश गर्नुभएको थियो । एम्बुलेन्स परिवर्तन गरी उनिहरु यहाँ आइपुगेका थिए । उनिहरु घर आएदेखि नै सेल्फ क्वारेन्टिनमा बसेका थिए । सङ्क्रमण देखिएपछि भरतपुर महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले आज कन्टयाक्ट ट्रेसिङ गरेको छ । सङ्क्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आफ्नै परिवारबाहेक अन्य कोही पनि सम्पर्कमा नआएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दीपक सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्क्रमितको घरमा आठ जना मात्रै बस्दै आएका थिए । उनीहरुको एक सातापछि पिसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिने जनाइएको छ ।
अहिले सङ्क्रमित देखिएको टोललाई सिल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । प्रहरीले सो टोलमा आवातजावत गर्न बन्देज लगाएको छ । सङ्क्रमित बिहीबार आफँै परीक्षण गर्न भरतपुर कोरोना अस्पताल पुगेका थिए । उनीहरुमा सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै अहिले भरतपुर कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
यस्तै नवलपरासी पूर्व विजय त्रिवेणी गाउँपालिका–६ निवासी ४५ वर्षीय पुरुषको पनि भरतपुर कोरोना अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ । अहिले सो अस्पतालमा चार सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ । दुई थपिएसँगै चितवनमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ । यसअघि सङ्क्रमण पुष्टि भएका राप्ती नगरपालिकाका दुई आमा छोरा निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने एक महिलाको काठमाडौँमै उपचार भइरहेको छ ।